Shan janna lagu galaa – Biyacade
October 5, 2016 October 5, 2016 biyacade
1) Sheekeyn aan been lagu darin.
2) Ballan qaad aan la burineyn.
3) Aaminaad aan la khiyaaneyn.
4) Indhaha oo xumaanta laga jeediyo.
5) Ferjiga oo sinada laga ilaaliyo.
Previous Shan waxaa ka hara shan
Next Shan waa dawada qalbiga